Kodzero-dzevanhu, 17 Mbudzi 2017
Chishanu 17 Mbudzi 2017
Mbudzi 17, 2017
Vakawanda Vanoti SADC Haifanirwe Kupindira Pane Zviri Kuitika muZimbabwe
Vanhu vakawanda vari kushora zvikuru sangano reSADC vachiti harifanirwi kupindira pagakava remuZimbabwe sezvo munyika muine runyararo.
General Chiwenga Vorumbidzwa muZimbabwe
Vakarwa hondo yerusununguko pamwe neveruzhinji munyika varumbidza mukuru wemauto, General Constantine Chiwenga, segamba risina rusarura vachiti mushure mekubvuta simba kuna VaMugabe svondo rino vangadai vakazvigadza semutungamiri wenyika.........
Matunhu Ose Anobuda neChisungo Chekuti VaMugabe Vasiye Basa
Matunhu ose munyika aita musangano wechimbi chimbi akabuda nechisungo chekuti mutungamiri webato, uye vari mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vasiye basa vega mumazuva maviri ari kutevera, kukundikana kwavo, vachamanikidzwa kusiya basa.
Mitambo Yoenderera Mberi seMazuva Ose
Mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi kunyange hazvo munyika musina kumira zvakanaka.
Mbudzi 16, 2017
SADC Troika Yokurudzira Musangano weChimbichimbi Kuti Zimbabwe Ikurukurwe
Sangano reSADC iro raswera ririmumusangano zuva rese muGaborone kuBotswana richizeya nyaya yeZimbabwe, rabudisa gwaro richiti zvirinani kuti sangano ravo risheedze musangano wechimbi chimbi kuti udzeye zvirikuitika muZimbabwe nekukurumidza.
Mauto Achiri Kunyengetedza VaMugabe Kuti Vasiye Basa
Nhaurirano pakati pemutungamiri wenyika VaRobert Mugabe nevakuru vemauto dzinonzi dziri kuenderera mberi kuState House asi pasina kuwirirana panyaya yekuti VaMugabe vachienda pamudyandigere.
Amai Mujuru Vokurudzira Hurumende Inosarudzwa neVanhu
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau neChina masikati muHarare, Amai Mujuru varamba kutaura zvavanofunga pamusoro pezvakaitwa nemauto.
Nyanzvi Dzinoti VaMugabe Vakazvisikira Moto Muziso
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, semunhu mukuru, vangadai vakasiya basa kare uye dai hutongo hwavo hwaive hwakanaka, vangadai vasiri mumatambudziko avari pari zvino.
SADC Yoita Musangano weChimbi Chimbi Kuti Izeye Zimbabwe
Musangano uyu wadaidzirwa nasachigaro we SADC, Va Jacob Zuma, avo vakurudzira mauto emuZimbabwe kuti achengetedza runyararo pamwe nekugadzikana kwemunhu wese.
Mbudzi 15, 2017
VaMugabe Vanochengetedzwa neMauto
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nemudzimai wavo, Amai Grace Mugabe, vanonzi vachakachengetedzwa pamwe nemamwe makurukota akatizira kumba kwavo kuBlue Roof kuBorrowdale.
Mauto Ochengetedza VaMugabe, VaMoyo naVaKasukuwere ku"Blue Roof" kuBorrowdale
Mashoko atiri kutambira anoti mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe nemudzimai wavo Amai Grace Mugabe vakachengetedzwa pamwe nemamwe makurukota maviri ainge atizira kumba kwavo kuBlue Roof kuBorrowdale apo vainge votsvagwa nemauto nezuro manheru.
Vakawanda muBulawayo Votambira neMufaro Zvaitwa VaMugabe neMauto
Mutungamiri weZapu, VaDumiso Dabengwa, vati vaiwona kutorwa kwemasimba nevechiuto chiri chaigona kuitika munyika, uye chichitsigirwa neveruzhinji.
Mutori weNhau dzeMifananidzo Orangarira VaTsvangirai
Makereke Oramba Kuti Ari Kushandiswa Kukonzera Kusagadzikana Munyika
Hurumende Inotara Tsaona yeMigodhi kuKadoma seTsaona yeNyika Yose
Hurumede Yoronga Mutemo Unoomesera Vari Kutengesa Mari paMukoto
European Union Yoronga Kutemera Vamwe Vakawanda muHurumende yeZimbabwe Zvirango